Esi tinye kaadi SIM na LG Watch Sport | Gam akporosis
Esi tinye kaadi SIM na LG Watch Sport ọhụrụ
Jose Alfocea | | Nkuzi
Na February XNUMX, Google okpukpu abụọ site na ịmalite ihe a na-atụ anya ya, na oge, 2.0 Weebụ Weebụ, na smartwatches ọhụrụ ya nwere akara South Korea, LG Watch Sport na LG Watch Style.
Egwuregwu LG Watch bụ otu n'ime smartwatches mbụ iji bido gam akporo Wear 2.0. Nke a pụtara na, n'adịghị ka nwanne ya nwoke nke nta, LG Watch Style, nwere njikọ LTE agwakọtara, yabụ ndị ọrụ ọhụụ nwere ike, n'ikpeazụ, hapụ ama ha n'ụlọ wee pụọ na nnwere onwe dị ukwuu ịga ije, na-agba ma na-eme ihe omume ntụrụndụ ha n'èzí. Otú ọ dị, maka nke a ka o kwe omume, nche ga-enwerịrị kaadị SIM rụọ ọrụ n'ime na ị na-enye njikọta data ahụ.
LG ohuru - Elekere Google dị ugbu a na United States. N'okwu nke LG Watch Sport, ma ọ bụrụ na azụrụ ya site na ụlọ ọrụ AT & T ma ọ bụ ụlọ ọrụ Verizon, ọ ga-abataworị na-etinye kaadị SIM ahụ. N'agbanyeghị nke ahụ, ịnwere ike ịgbanwe ya maka onye ọrụ ọzọ, ma ọ bụ mkpa ịtinye kaadị SIM ma ọ bụrụ na ị zụrụ elekere ahụ kpọmkwem na Storelọ Ahịa Google. N'ọnọdụ ọ bụla, mgbe ọ dị na mba ị na-agụ anyị, ị nwekwara ike ịchọ ịma otu esi etinye kaadi SIM.
Insertfanye kaadi SIM na LG Watch Sport naanị ị ga-etinye soro usoro ndị ọzọ:
Tụgharịa smartwatch ma chọta oghere atọ ahụ gburugburu gburugburu nke azụ ya.
Were ihe egwuregwu SIM nwere triangular nke na-abịa na LG Watch Sport wee dakọtara ya na oghere atọ akpọrọ.
Pịa akụrụngwa ike na elekere ma gbanwee ya na-adịghị anya ruo mgbe ọ kwụsịrị ị nwere ike ibuli mkpuchi ahụ ngwa ngwa
Mia kaadị SIM n'ime oghere akpọrọ "nano SIM"
Bugharia okpu ya na ngwa SIM.
I nwere obi abụọ? Ọfọn, nke a bụ vidiyo nkọwa nke AT&T mere:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Esi tinye kaadi SIM na LG Watch Sport ọhụrụ
Sonos bulie ọnụahịa nke ngwaahịa ya site na 25% na UK
Lenovo Moto G5 ga-adị ọnụ ala karịa onye bu ya ụzọ